Olkaa'i itti fufi
Olkaa'ii fi itti fufi
Akka ati kuusdeetaa galmeessuuf, gulaaluuf kuusdeetaa banuu, ykn gabatee haaraa galchuu ifeessa.
Eeyyeen, kuusdeetaa naaf galmeessi
Garagalcha fayyadamaa LibreOffice keessati kuusdeetaa galmeessuuf filadhu. Ega galmeessitee, kuusdeetaan foddaa Mul'annoo - Madda Deetaa jedhu keessatti agarsiifama. Kuusdeetaa dirree galmee keessatti galchuuf kuusdeetaa dirqama (Galchi - Dirreewwans - Kan biraa) ykn makiinsa ergannoo keessatti galmeessuu qabda.
Lakkii, kuusdeetaa hin galmeessin
Odeeffannoo kuusdeetaa faayila kuusdeetaa uumame keessatti qabuuf filadhu.
Kuusdeetaa gulaaluuf bani
Faayila kuusdeetaa agarsiisuuf filadhu, innis iddoo ati caasaa kuusdeetaa itti gulaaluu dandeessuu dha.
Gabateewwan masaka gabatee fayyadamii uumi
Erga Masakni Kuusdeetaa xumuramee Masaka Gabatee waamuuf filadhu.
Title is: Olkaa'i itti fufi